Muumichi ministeera Lubnaan Sa’aad Haririi aangoo gadi lakkise - NuuralHudaa
Home/Odeeyfannoo/Eeshiyaa/Muumichi ministeera Lubnaan Sa’aad Haririi aangoo gadi lakkise
Muumichi ministeera Lubnaan Sa’aad Haririi aangoo gadi lakkise
Lammiileen Lubnaan labsii gibira dabalataa mootummaan Appilikeeshiinota tajaajila wal qunnamtii kennan, kanneen akka whatsApp ilaalchisee baase mormuun, October 15/2019 irraa eeggalee daanditti bahan. Kanuma hordofuun mootummaan labsicha haquu beeksisee ture. Haa ta’u malee mormitoonni “qaalayiinsa jireenyaa hammataa dhufe fooyyessuuf qajeelfamni diinagdee mootummaan hordofu walumaa galatti dogongora waan taheef, mootummaan guutumatti aangoo gadi lakkisuu qaba” jechuun mormii gyyaa 14 dura jalqaban itti fufanii jiru.
Muummichi ministeera Lubnaan mormii ummataa kana qabbaneessuuf tarkaanfiiwwan adda addaa kan fudhataa ture yoo tahu, tarkaanfiilee kanneen jidduu daballii gibiraa hambisuu fi karoora bajataa haarayatti kan qopheesse tahuu beeksise. Haaluma kanaan muummichi ministeera Lubnaan Sa’ad Haririi, qondaaltonni mootummaa biyyattii hundi karoora bulchiinsa isaa kana akka deeggaran gaafatee ture.
Haata’u malee Sa’aad Haririi ibsa har’a gama televizhiinaatiin kenneen, karoora diinagdee fi bajataa haarayatti qophaahe hujii irra oolchuuf deeggarsa gahaa kan dhabe tahuu ibsuun, aangoo gadi lakkisuudhaaf kan murteesse tahuu hime. Haaluma kanaan muummichi ministeeraa xalayaa aangoo gad lakkisuu Prezadaantii biyyattii Misheel Awuniif kan kenne tahuu gabaafame
May 26, 2020 sa;aa 11:02 pm Update tahe